Meziwanye ọnọdụ Google gị na Twitter Site na ịgbaso Atụmatụ Semalt
Twitter bụ otu n'ime isi ihe ndị dị na ya mgbe ọ na-abịa n'ịkwalite ebe nrụọrụ weebụ gị na ịntanetị. Ndị mmadụ dị iche iche na-eji usoro mgbasa ozi mgbasa ozi a eme ihe na tweet ma amaghị ihe ọ pụtara. Akaụntụ Twitter gị nwere ike ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọtụtụ okporo ụzọ na echiche dị mma, yabụ na ị ga-ejikọta na ndị enyi na ndị ọgbọ dị mkpa n'oge ọ bụla o kwere omume. Nik Chaykovskiy, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-enyere ndị ahịa aka, kwuru na ọ dị mkpa ịkekọrịta njikọ na ọdịnaya ndị ọzọ na akaụntụ Twitter gị. N'otu oge ahụ, ị ​​ga-edekwu isiokwu na ebe nrụọrụ weebụ gị ma malite mkparịta ụka, zaa ajụjụ na ajụjụ, gwa ndị ahịa gị banyere ika gị, ma soro ndị enyi na Twitter kwusaa netwọk gị.
Ọ dị mma ikwu na Twitter bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị mma ma a bịa n'ịkwalite nkwalite - title attribute seo. Mkparịta ụka mgbe niile na mgbasa ozi ọha na eze dị mkpa ka usoro a na-elekọta mmadụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-eji ya eme obodo ma ọ bụghị maka nsogbu nke onwe gị. N'elu nke ahụ, Twitter nwere ike ịbara gị uru naanị ma ọ bụrụ na ị nụ na ị ga - echegharị banyere akara gị, nwee mkparịta ụka na ndị ọzọ, ma ndị nwere mkpa ga - agbaso gị.
Jiri Ngwaọrụ Twitter maka Nkwalite Ọdịiche
Enweghị ihe a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ ngwaọrụ ndị na-adịghị emetụta, ma ị nwere ike jiri aka Twitter jiri aka na-emekwuwanye ọtụtụ mmadụ. Ụfọdụ ngwaọrụ, Otú ọ dị, i nwere ike ịdabere bụ Twtpoll na Paywithatweet. Anyị enweghị ike ileghara eziokwu ahụ anya na ọtụtụ ndị na-eji ngwá ọrụ ndị a na mmemme yiri nke ahụ iji gbakwunye ndị na-eso ụzọ ha uru..Ị nwekwara ike ịkwalite gị Google ranking site na iji ndị ọrụ Twitter a ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ.
Jikọọ na ndị mmadụ na saịtị ndị ọzọ Social Media
Ụzọ ọzọ iji nwetakwuo Twitter ndị na-eso ụzọ bụ site n'ịgwa ndị mmadụ na ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi na-akpọ ha ka ha soro gị na Twitter. Tụkwasị m obi, ọ bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mfe na n'ụzọ dị ịtụnanya isi zute ọtụtụ mmadụ. Ị ga-ekwurịta ihe dị iche iche na ha ma gwa ha ka ha soro gị kọọrọ ha LinkedIn, Fifequare, FriendFeed, Facebook na Quora. Ime otú ahụ ị nwere ike ijide n'aka na ị nweta ọtụtụ nke Twitter ndị na-eso ụzọ, na ọ bụ ụzọ dị mfe iji mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ ma kwalite gị ika online. Ozugbo e mepụtara ika gị, saịtị gị ga-enweta ọtụtụ nlele na ọkwa dị mma na Google.
Gbaa Twitter Competitions
Ị ghaghị ịgba ọsọ asọmpi Twitter iji nweta ndị mmadụ. Tụgharịa mgbe niile ma na-agba ọsọ n'ọtụtụ nzere ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike itinye aka. Ọ bụ SEO mgbalị iji nwee ike melite saịtị gị na ogo ma na mgbasa ozi na search engine utịp. Ikwesighi inwe obi ike itinye ego na ya. N'ụzọ doro anya, ọ bụ azụmahịa azụmahịa na nwere ike ịchọ ego gị, oge na mgbalị. Inweta na akaụntụ ahụ na nsonaazụ na nsonaazụ ndị dị oke mma, ị ghaghị ịmalite asọmpi Twitter n'oge ọ bụla o kwere mee. Ihe niile a ga - eme ka Google mara ọkwa na ị ga - enweta ọtụtụ ndị ahịa ndị nwere ike ịmasị ngwaahịa na ọrụ gị.